कुश्मा नगर प्रमूख रामचन्द्र जोशी द्धारा नौ कोठे विद्यालय भवनको शिलान्यास | Sabaiko Online
Home Flash News कुश्मा नगर प्रमूख रामचन्द्र जोशी द्धारा नौ कोठे विद्यालय भवनको शिलान्यास
कुश्मा नगर प्रमूख रामचन्द्र जोशी द्धारा नौ कोठे विद्यालय भवनको शिलान्यास
पर्वत । कूश्मा नगरपालिका वडा नं. २ खुर्कोटमा हिमालय माध्यामिक विद्यालयको ९ कोठे भवनको शिलान्यास भएको छ । उक्त ९ कोठे भवन कूश्मा नगरपालिकाका प्रमूख रामचन्द्र जोशीले एक कार्यक्रमका विच हिजो शिलान्यास गर्नुभएको हो । भवन शिलान्यास गर्दै जोशीले खुर्कोट,पाङ्गवासीहरुका लागी गुणस्तरीय शिक्षा लिन अव भवनको खाचो नहुने वताउनू भयो । शिक्षा लिने स्थान शान्त र सिक्न लायक भौतिक संरचना हून जरुरी रहेको वताउनू भयो । सवै खाले चेतनाको विकास गर्ने शिक्षा आर्जनका लागी उचित भौतिक संरचना र वातावरण आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको प्रमूख आधार भवन भएको वताउनू भयो । भवन निर्माणले शिक्षा लाई थप टेवा त दिन्छ नै त्यसको लागी तालिम प्राप्त र दक्ष शिक्षकको पनि आवश्यकता पर्ने वताउनू भयो ।
आजको यूग शिक्षा र प्रविधिको यूग हो त्यसकारण यूग सूहाउदो शिक्षा प्रदान गर्न सवै गूरुहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । अभिभावकले विद्यार्थी र गूरुहरु विच समय समयमा अनूगमन र अन्तरकृया गरेर शिक्षक विद्यार्थी विचको सिकाईमा रहेका ग्यापहरुलाई हटाउन आग्रह गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा कूश्मा नगरपालिका वडा नं. २ का वडा अध्यक्ष यदूनाथ वास्तोला,हिमालय माध्यामिक विद्यालयका भूपू विद्यार्थी समाजका पूर्व अध्यक्ष कमलराज पौडेल,लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष गणेश वहादूर क्षेत्री, भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष कृष्ण नेपाली लगायतले आप्नो धारणा राखेका थिए ।
उक्त भवनको लागी नमूना विद्यालय विकास गूरुयोजना अनूसार संघिय सरकार वाट डिपिआर वमोजिम २८ करोड लाग्ने स्टिमेट तयार भएको छ । यस वर्ष १ करोड ५८ लाख निकासा भएको छ । ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि संघिय सरकार शिक्षा मन्त्रालयले नमूना विद्यालय कार्यक्रम अन्तरगत उक्त वजेट विनियोजन गरेको थियो । देउवा सरकारको पालामा नमूना विद्यालय कार्यक्रममा छनौट भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छत्रराज रेग्मीले जानकारी गराउनू भयो ।
उक्त विद्यालयमा ९ कोठा सहित सूविधा सम्पन्न तालिम हल,१ सय जना छात्रा र १ सय जना छात्र वस्न मिल्ने होस्टेल,अफिस,ल्याव,कम्प्यूटर कक्ष लगायतको व्यवस्थित भवन वन्ने स्टिमेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल उक्त विद्यालयमा ४२० विद्यार्थी २८ जना शिक्षक सहित कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । २०२२ सालमा स्थापना भएको विद्यालय यस भन्दा अगाडी स्वार्ण महोत्सव मनाईएको थियो । विद्यालयको कोषका लागी धनधान्यचल समेत लगाएर अभिभावकहरुले विद्यालय संचालन गर्दै आएका छन् ।
उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष छत्रराज रेग्मी र कार्यक्रम को संचालन प्रधानध्यापक माधव रेग्मीले गर्नु भएको थियो ।